आगो पोलेमा के गर्ने ? यस्तो छ उपचार विधि - Everest Dainik - News from Nepal
आगो पोलेमा के गर्ने ? यस्तो छ उपचार विधि
० आगोले पोलिरहेको छ भने तुरुन्तै कम्बलले छोपेर घटना स्थलबाट बाहिर निस्कने–निकाल्ने र बाक्लो कपडाले छोप्ने ।
० घटना भएलगत्तै पोलेको अंग चिसो पानीमा डुबाएर राख्ने ।
० पानी नभएको अवस्थामा नरम कटनको कपडाले छोप्न पनि सकिन्छ ।
० पोल्नेबित्तिकै मानिसको शरीरमा भएका औँठी, चुरा, माला, जुत्ता वा अन्य कसिलो सामग्रीलाई शरीरबाट उतार्ने । नत्र पोलेको भाग सुन्निएर पछि निकाल्नै अप्ठ्यारो हुन्छ ।
० बिरामी खान सक्ने अवस्थामा भए प्रशस्त पानी वा अन्य झोलिलो पदार्थ सेवन गराउने ।
० जलेको भागमा कुनै पनि प्रकारको लोसन, तेल वा अन्य पदार्थ नलगाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउने ।
० जलेपछि उठेको फोकालाई कहिल्यै पनि फुटाउने प्रयास गर्नुहुँदैन ।
० रासायनिक जलन छ भने रसायनले भिजेको कपडालाई तुरुन्तै शरीरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । र, प्रभावित भागलाई करिब २० मिनेटसम्म चिसो पानीले सफा गर्नुपर्छ ।
० त्यस्तै, रसायनले जलेको अवस्थामा सोडियम बाइकार्बोनेटले धुन पनि सकिन्छ । एजेन्सी